Chọọchị: nrọ abụghị premonitory | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Mina Del Nunzio - Machị 3, 2021
Chọọchị: i sogni ha abụghị premonitory. Kedu ihe ndị Katọlik kwesịrị iche maka nrọ? Ka anyị chọpụta ọnụ otú Chọọchị Katọlik ruo ajuju a. Ọ bụ ezie na Catholicka Katọlik, na-adọ aka na ntị megide iji ha na nkwenkwe ụgha, na-akatọ njehie na-akpata nyocha Freudian nke nrọ. Nrọ bụ akụkụ a maara nke ọdịnala Katọlik.
Iji dokwuo anya echiche anyị bụ onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ Pedro Meseguer. Ọ na-ekpughe ọrụ dị mkpa nke ọdịnala na-akwado nke ọma, nrọ nwere ike iwe iwe ndụ ime mmụọ nke Ndị Kraịst ma nwee ike ịba oke maka ndị nkwupụta na ndị nchegharị. Gịnị bụ ọrụ anyị? ezi uche maka ọdịnaya nke nrọ anyị? Anyị na-achọta azịza ya n'ihe odide, karịa ederede anyị nwere ike ikwu maka ya iwu dị ka ndị ahụ St. Thomas.
Iwu nke ndị Katọlik dere ederede ime mmụọ maka nghọta nrọ na ọhụụ ndị ọzọ na-eche n'echiche. Nrọ nwere ike ịbụ kọwaa: ncheta, echiche, anya, ụda, uche, echiche, mmetụta uche, mmezu ọchịchọ, nchegbu. Ha na-atụgharị uche na ahụ ma na-agụnye uche na mkpụrụ obi.
Chọọchị: nrọ abụghị premonitory, gịnị ka ha bụ?
Chọọchị: nrọ abụghị premonitory, gịnị ka ha bụ? ka anyị chọpụta ọnụ nrọ ndị bụ maka ụka Katọlik. Nrọ nwere ike ịbụ otu isi iyi ma obu a ugbo ala ọnwụnwa. Mgbe ụfọdụ Ee jiri nrọ gwa ndi mmadu okwu na obuna inye amara dika St. Augustine na-atụ anya ihe ezi uche dị na nkà mmụta sayensị nke oge a. Qunrọ ndị bụ nlezianya nkwenkwe ụgha na mgbe ha bụ ụkpụrụ omume Ndị Kraịst?
Nrọ na-egosipụta "echiche etiti"(Dị mkpa maka nkọwa)
M "akara " dịka ọmụmaatụ na nrọ ha na-enye echiche na echiche dị iche iche, nwere njikọ chiri anya na nkwenkwe ụgha. Dị ka ọgba aghara onwe onye, ​​ha na-eme ka nrọ ndị kachasị baa uru. Kedu otu nrọ nwere ike mgbe ụfọdụ "gbalịa" azịza maka nsogbu. Ọrụ "cathartic" nke nrọ, na - eme ka mmetụta dị ma ọ bụ nke dị ike dị ọcha.
P. Meseguer, na-eme ka o doo anya na: nrọ dị ka ugbo ala nkwurịta okwu Chineke, ma n'ime ide karịa na ndụ nke santi na chi ihe omimi. Chọọchị na-ekwu na nrọ bụ: nke ọ bụla Chineke ji eme onwe ya ka ọ rụọ ọrụ, nke enweghị nzube na-enweghị isi. Meseguer, alaghị azụ iji tụlee isiokwu siri ike nke a ga-eji ọgụgụ isi mee wee. Ya mere telepathy, mmụọ ozi, mmụọ ọjọọ, amụma nrọ, nrọ na ịdị ọcha, ngosipụta nke ndị nwụrụ anwụ na nrọ enweghị njikọ na Chọọchị Katọlik.
Saint Bernadette, Eprel 16: ihe ịmaghị banyere onye nsọ ahụ hụrụ Madonna
Echiche nke Padre Pio na Eprel 14, 2021 na nkọwa banyere Oziọma taa
Ekpere: Chineke nọ ya mgbe uche anyị na-awagharị
Padre Pio: nnwere onwe, na-arụ ọrụ maka ndị ogbenye
Ọrụ ebube ọzọ nke Padre Pio: ọ gara ileta otu nwoke nọ n'ụlọ mkpọrọ
Onye ọhụụ nke Akita natara ozi ikpeazụ